पुन:संरचनाको पर्खाइमा निजामती सेवा
भदौ २७, २०७५| प्रकाशित ०९:१०
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र त्यति नै लामो संक्रमणकीन अवस्थाको अन्त्य पछि नेपाल अहिले समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर हुन प्रयासरत छ। नागरिकका अपेक्षाहरु चुलिएका छन्। नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न राज्यको काम गर्ने हातका रुपमा रहेको निजामती सेवा पनि सोही अनुरुप परिवर्तित र पुनःसंरचित हुन आवश्यक छ।
तर, विडम्बना राज्यको तर्फबाट नागरिकलाई सेवा वितरण गर्ने निजामती सेवा अहिले पनि पुरानै पारा र परम्पराबाटै चल्दै आएको छ। पछिल्लो एक दशक राज्यको पुनःसंरचना सम्बन्धी बहसको दशक रह्यो तर यो बहसमा राज्यको स्थायी सरकार भनिने निजामती सेवाको पुनःसंरचनाको सवालले स्थान पाउन सकेन। हाम्रोमा राज्यको पुनःसंरचनाको बहस जातीय अकंगणितको मिलानमै अल्मलियो। तर निजामती सेवाको रुपान्तरण र पुनःसंरचना गर्ने मुद्दा कसैको पनि प्राथमिकतामा परेन। फलस्वरुप तिनै तहको निर्वाचनपछि पनि नागरिकलाई सरकारले प्रवाह गर्ने सेवा प्रभावकारी हुन सकेन भनी टीप्पणी हुन थालेको छ।
कुनै समय थियो, विश्वविद्यालयका उत्कृष्ट विधार्थीको पहिलो प्राथमिकता निजामती सेवामा प्रवेश गर्नु हुन्थ्यो। तर, अहिले प्रतिभावान् विधार्थीको प्राथमिकतामा निजामती सेवा पर्दैन। विश्वव्यापीकरणको प्रभावले देशबाट नै प्रतिभाको पलायन भैराखेको छ। यस्तो अवस्थामा केही हदसम्म यो स्वभाविक पनि होला तर पनि श्रम बजारमा उपलब्ध उत्कृष्ट जनशक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नखोज्नुका कारणको सम्बन्धमा समीक्षा हुन आवश्यक छ।
निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको मनोबल र कार्यक्षमता पनि खासै सन्तोषजनक छैन। निजामती सेवाको प्रवेशसम्म योग्यता प्रणालीमा आधारित होला तर सेवामा प्रवेश गरेपछिका सरुवा, बढुवा र अन्य अवसर भनसुन र पहुँचमा नै आधारित छ। काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीको बीचमा कुनै भेद छैन। न त कसले कति काम गर्यो, भनी मापन गर्ने वस्तुगत आधार नै छ। अझैपनि कति वर्ष कुर्सी ओगटेको भन्ने आधारमा बढुवा हुन्छ। हाजिर गरेको भरमा जाँगिर पाक्छ। आश्चार्य! काम गर्ने र नगर्ने सबैको कार्य-सम्पादन मूल्याङ्कन बराबर नै हुन्छ। मुलुकको समग्र प्रशासन, सञ्चालन र व्यवस्थापनको मूलभुत जिम्मेवारी पाएको निजामती सेवाप्रतिको जनविश्वास र जन-आस्था जुन रुपमा हुनुपर्ने हो, त्यो रुपमा हुन सकेको छैन।
नतिजालाई भन्दा प्रक्रियालाई बढि जोड दिने, अधिकार खोज्ने तर उत्तरदायित्वबाट पन्छिने, काम नगर्ने तर बढि सेवा सुविधाको दाबी गर्ने, सेवाग्राहीलाई वास्ता नगरी शासकीय तुजुक देखाउने, अधिकारको केन्द्रीकरण गर्न रुचाउने, गोपनियतामा रमाउने लगायतका आरोप निजामती सेवालाई लाग्दै आएको छ। विकासको सुस्त गति, मौलाउदो संस्थागत भ्रष्टाचार, सामाजिक साँस्कृतिक विचलन र कमजोर सुशासनकाका कारण पनि कर्मचारीतन्त्र विभिन्न आरोप लाग्दै आइरहिएको छ।
नीतिगत अस्थिरताको मारमा पनि निजामती सेवा पर्यो। कुनै पनि कुरा अनुमानयोग्य भएन। व्यक्तिगत स्वार्थलाई पूर्ति गर्न कानून नै संशोधन गरिए। लोकसेवा आयोगले सेवा प्रवेशको क्रममा भर्ना प्रक्रियामा अपेक्षित रुपमा निश्पक्षता कायम गरेको भएतापनि सेवा प्रवेश पछिको अवसरमा योग्यता प्रणाली कायम हुन सकेन।
कर्मचारी पनि यसै समाजको सदस्य भएकोले उसको निश्चित राजनैतिक आस्था वा झुकाव हुन सक्छ। यो स्वभाविक हो। तर, जब यो राजनैतिक झुकाव वा आस्थानै कुनै अवसर प्राप्तिको लागी योग्यता वा अयोग्यता बन्छ राजनीतिक हस्तक्षेप त्यही विन्दुबाट शुरु हुन्छ। कर्मचारीको हक हितको लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने भनी सुरु गरिएको ट्रेड युनियन अभ्यासले विकृत रुप धारण गरेको छ। निजामती सेवामा राजनीतिको प्रभाव यति सम्म बढेको छ कि हरेक राजनीतिक दलका आ-आफ्नो कर्मचारी संगठन छन्।
ट्रेड युनियनका नेताहरु कर्मचारीतन्त्रको पदसोपान भन्दा बाहिर छन्। समानान्तर शक्तिको रुपमा स्थापित भएका छन्। संगठनको पदाधिकारी भएपछि काम गर्नुनपर्ने र काठमाडौं बाहिर सरुवा पनि हुन नपर्ने अचम्मको कानूनी व्यवस्थाको सदुपयोग गर्दै ट्रेड युनियनका नेताहरु पुल्पुलिएका छन्। त्यसैले आफूले भनेजस्तो सरुवाको सूची बनेन भने मन्त्रालयकै सचिव कुट्न पनि पछि पर्दैनन्। सचिव, महानिर्देशक जस्ता पदमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक भागवन्डा र हस्तक्षेप हुने गरेको खुला रुपमा पढ्न र देख्न पाइन्छ।
निजामती प्रशासनले राजनीतिबाट नै वैधता प्राप्त गर्ने भएकोले राजनैतिक नेतृत्वप्रति एक हदसम्मको प्रतिवद्धता आवश्यक छ। तर सरकारी कर्मचारी नै अमुक राजनीतिक दलको पिछलग्गु बन्न पुग्छन्। यसकारण निजामती सेवाले आफ्नो व्यवसायिक चरित्र गुमाएको छ। मुलुक संघीयतामा गई तीन तहको सरकारको गठन भैसकेको अवस्थामा सरकारले कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा पठाउन खोज्दा समेत खटाउन नसक्नु भनेको निजामती सेवाले आफ्नो व्यवसायिकता गुमाएको प्रमाण हो।
निजामती सेवाको सुदृढीकरण र सबलीकरण कुनै पनि नेताले नेतृत्व गरेको सरकारको प्राथमिकतामा परेन। निजामती सेवाको सुधारको लागि थुप्रै आयोग र कार्यदलहरु त बने, तर तिनले दिएको प्रतिवेदन केवल परीक्षामा पढ्ने सामग्रीमा मात्र सीमित रहे। प्रशासन सुधारको नाममा सधैं संरचनागत सुधारमा जोड दिइयो तर कार्यात्मक सुधारमा कसैको ध्यान गएन। न त संरचनागत सुधार नै हुन सक्यो।आमूल परिवर्तनको प्रयास नहुँदा यथास्थितिमा चलिरहेको निजामती सेवाले राणाकालदेखिकै विरासतमा पाएका चाकडी, चाप्लुसी, नातावाद, कृपावादलगायतका धेरै परम्परा र प्रवृतिलाई पनि सँगै लिएर हिड्यो, हिँडिरहेकै छ। राजनीतिक नेतृत्वले व्यवसायिक निजामती सेवाभन्दा राजनीतिक रुपमा प्रतिवद्ध निजामती सेवाको अपेक्षा राख्यो। लामो समयसम्म चलेको राजनीतिक अस्थिरताको मारमा निजामती सेवा पनि पर्यो।
निजामती सेवामा एकातर्फ माथि उल्लेख गरिएका जस्ता समस्या छन् भने अर्कोतर्फ यो सेवाप्रति नागरिकको आकांक्षा पनि बदलिएको छ। मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै सार्वजनिक प्रशासन पनि सहभागितामूलक र समावेशी हुनुपर्ने, प्रदत्त उत्तरदायित्व बोक्नुपर्ने, आम-जनताको लागि सेवामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्नुपर्ने, प्रविधि मैत्री हुनुपर्नेजस्ता विषय उठेका छन्। सार्वजनिक प्रशासनमा पनि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सहभागिता र प्रभावकारिताको खोजी भएको छ। निजामती सेवा अबको आवश्यकता हो।
संविधानमा संघीयताको व्यवस्था गरेपछि गाँउ-गाँउमा सिंहदरवार भन्ने नारा खुबै लगाइयो। तर, अहिलेसम्म पनि कर्मचारीको अभावमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको अवस्था छैन। संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको आदर्श प्राप्त गर्न प्रथमतः निजामती सेवाले गाँउ-गाँउसम्म आफ्नो सेवा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। काठमाडौंकेन्द्री मानसिकता बोकेको कर्मचारीतन्त्रले संविधानले अवलम्बन गरेको संघीयता र समावेशिताको अवधारणा बोक्न सक्दैन। त्यसैगरी अबको निजामती सेवा दक्ष र प्रभावकारी पनि हुनुपर्छ।
कमजोर कार्यक्षमता भएको कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि लोकतन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र विकेन्द्रीकरणको विरोधी हुन्छ। यसले आफ्नै सिर्जनामा केही गर्दैन। माथिको आदेशबाट मात्र यो सञ्चालित हुने भएकोले यसले केन्द्रीकृत राज्य सञ्चालनमा मात्र जोड दिन्छ।
ठुलो संवैधानिक र राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् अब मुलुकको निजामती सेवाको पनि पुनःसंरचना र रुपान्तरण हुन आवश्यक छ। संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदाको प्रक्रिया चलिराखेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा निजामती सेवाको रुपान्तरण गर्ने अवसर पनि यतिबेला छ। यस अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर उपयुक्त कानूनको निर्माणमा लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो।
(लेखक निजामती सेवामा उपसचिव पदमा कार्यरत छन्)
Corection and improvement isamustin in this changed time course and this federal state. Salute to the author for valuable suggestion on how the bureaucracy can be improved /corrected/changed. I totally agree with most valuable suggestion and better wayforward on behalf of civil servant. However, I thing the article left to mention the policy and attitude of government towards civil servants . Nothing can be done through the mere blackletters of the law. Instead the attitude policy or conception towards civil servant should be positive. Better inriched conception toward bureaucracy isamust for better future civil servant! Therefore for the netter and effiscient civil service at least following things should be reconsidered: proper mangement of number of c s Revision of Salary and allowances of cs with proper attention to necessities... right man in right place PropeEr management of transfer system (rule based) insurance of clear career path Watertight Performance based incentive Clear job responsibility / accountability Comptency developmet on computer/information /tenchology Whole system improvement through technology Other monytary and non monitary incentives and motivations... Recent conception of government toward civil servant realy makes us cry.. We are not JUST "THANGNE AND JHOLE " to get respect from others i think respect to other isamust even from the side of government... SALUTE SANDESH SIR FOR YOUR VALUABLE WORDS THROUGH YOUR PRECIOUS ARTILE ....
अधिकांश लेखकका लेखहरु त राम्रै लाग्छ तर व्यवहारमा केन्द्रीकृत छन् ।
शिक्षक र कर्मचारी बीच ५/५ वर्षमा फेरबदल अर्थात् सरुवाको ब्यबस्था गर्नुपर्‍यो ।